Sawirro:Weerarkii Hoteel SYL oo Fashiliyay Gulufkii Sugidda Ammaanka Ee Magaalada Muqdisho.
Thursday January 22, 2015 - 15:57:41 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo ciidamo taabacsan xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay ka fuliyeen Hoteel ammaankiisa si aad ah loo adkeeyo oo kuyaal Muqdisho.
Kumanaan katirsan ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaad farabadan oo katirsan DF-ka ayaa 6-dii maalmood ee lasoo dhaafay howlgallo raaf ah ka waday intaban degmooyinka Muqdisho ee ku teedsan sedaxda waddo ee halbowlaha u ah gobolka Banaadir.
Ciidamada ayaa xiray waddooyinka 30-ka,Makka Al-mukarama iyo Wadnaha waxayna howlgallaadaasi saameyn muwaadiniinta caadiga ah ee u shaqa doonta suuqyada iyo ardayda waxka barata iskuullada iyo jaamacadaha.
Inta la ogyahay 6 qof oo askar iyo saraakiil kamid yihiin ayaa weerarka ku dhimatay,goobta weerarku ka dhacay oo ah Hoteel SYL ayaa ammaankiisa si aad ah loo adkeeyaa wuxuuna ku dhawyahay Villa Somalia oo xarun u ah madaxda ugu sarreysa DF-ka.
Wadada Makka Al Mukarama oo Hotelka SYL dacal ka saaranyahay waxaa maalmihii lasoo dhaafay mamnuuc ka ahaa in gaadiidka dadweynaha uu isticmaalo dhammaan wixii dadaal ahaa ee ammaanka caasimadda lagu sugayay ayaa fashilmay kadib markii uu dhacay weerarkii maanta.